Google inoshandura saiti yekugadzira yezvigadzirwa zvayo kune yekare Nokia fekitori | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yeiyo vhiki ino nhau dzakaburitswa iyo Google, American internet hofori, inoronga kuendesa kugadzirwa kweakawanda emidziyo yayo, kusanganisira mafoni ePixel uye yako Google Home smart mutauri, kubva kuChina kuenda kufekitori yekare yeNokia muVietnam.
Nayo Google inoburitsa pamwe nekufamba uku kuti iyi ingave zano rekumisikidza yakachipa-kudhura yekutengesa ku Southeast Asia, kunyanya kupihwa kusagadzikana kwezvekutengeserana muChina, sekuziva kwevazhinji muUnited States, mari dzevashandi dziri kuwedzera kuChina uye mitero iri kukwira nekuda kwehondo yekutengeserana ine nyika mbiri idzi parizvino.
Zvinoenderana nezvinyorwa zvemapepanhau, fekitori iyi, uko kuchagadzirwa kwePixel mafoni, Inowanikwa mudunhu reBac Ninh kuchamhembe kweVietnam.
Iyi ndiyo purovhinzi imwechete iyo Samsung yakagadzira yayo cheni yekuwanisa mafoni Makore gumi apfuura, izvo zvaizoreva kuti Google ichave nekwaniso kune vane ruzivo vashandi.
Iyo kambani inonzi zvakare iri kuronga kutengesa kunze kwenyika mamirioni 8-10 mamirioni gore rino, zvakapetwa kaviri gore rapfuura, ichiita Vietnam chikamu chakakosha chekukura kweGoogle mumusika we smartphone.
Iyi dhiraivha nyowani yekuvandudza Vietnamese yekugadzira base neGoogle inoratidza kudzvinyirira kuri kusangana nemakambani mazhinji kubva yakakwira maChinese evashandi emari uye mitero inokwira ichibva muhondo yekutengeserana pakati peWashington neBeijing.
Eya, izvi zvisati zvaitika, Google haina imwe sarudzo kunze kwekutsvaga dzimwe nzira dzekuendesa kugadzirwa kweakawanda ehurongwa hwayo kuenda kuUnited States kunze kweChina, semuenzaniso uyo watove mupenyu yaive kesi yeHuawei apo imwe yevatengi vayo vakuru ichiripo pane tambo yeiyi yekutengeserana hondo.
Nemamiriro ezvinhu aya, Google inoda kudzivirira kuva mumwe nyajambwa chero zvodii uye vakasarudza kutsvaga kutamisirwa kwekugadzirwa kwezvigadzirwa zvayo zvinosanganisira Pixel nhare uye mukurumbira mukurukuri mutauri, Google Imba, sekureva.
Google inoita kunge iri kusarira kumashure mukukura uku. HP naDell vakatamisa zvakare yavo server kugadzirwa kunze kweChina kudzivirira mutero wechirango wakatemerwa neWashington, uku uchiendesa zvimwe zvekugadzira laptop kuTaiwan nedzimwe nyika dzeSoutheast Asia dzakaita seVietnam, Thailand nePhilippines.
Kana zviri zveApple, kambani inorongawo kupatsanuka kubva kuChina, asi izvi zvakaoma kwazvo kuzadzikisa nekuti zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana zvemidziyo yayo inogadzirwa munyika.
Pari zvino Google inozivikanwa kuendesa chikamu chePixel 3A yekugadzira foni kuenda kuVietnam gore rino risati rapera.
Zvimwe zve smart speaker kugadzirwa zvinogona kuendeswa kuThailand, asi kugadzirwa kwechigadzirwa chitsva uye kugadzirwa kwekutanga kwekambani Hardware renji ichaenderera kuChina.
Kufamba uku neGoogle kunosiya vazhinji vachinetsekana nekuti vanosiya vachifunga nezve mukana wekuti kambani iyi nekuenda kuVietnam ichakonzera kudzikira kwekudzora kwemhando yezvigadzirwa kuitira kudzikisa mari yakawanda.
Nekusiyanisa kugadzirwa kwayo muVietnam, Google inotarisira kuona kugadzirwa kwePixel.
Pamusoro pezvo, mushandirapamwe weGoogle une hukasha wehurdware unotarisirwa kuisa kumanikidza kune vanogadzira nharembozha-vechipiri vakaita se LG Electronics uye Sony, vari kunetseka sezvo indasitiri yakatarisana negore rechitatu rinoteedzana rekudonha.
Iyi haisi yekutanga Google kufamba kunze kweChina. Zvinotaridza kuti kambani iyi yanga ichishanda kuendesa Nest uye US-based kifaa server kugadzirwa kuTaiwan neMalaysia kutanga kwegore rino, zvakare kudzivirira kuwedzera kwemitengo nekuda kwehondo yekutengeserana yeUS. Uye China.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inoshandura saiti yekugadzira yezvigadzirwa zvayo kune yekare Nokia fekitori